Fampiharana 10 ambony hanaovana sari-hevitra momba ny konsep | Androidsis
Ignacio Sala | 16/07/2021 18:00 | Fampiharana Android
Ny fampiasana finday avo lenta nitombo be raha oharina amin'ny solosaina nentim-paharazana tato anatin'ny taona vitsivitsy, na dia tsy maintsy nizaka ny areti-mifindra coronavirus aza izy hanehoana fa tsy azo soloina finday smartphone mihitsy ny solosaina. Tamin'izany fotoana izany dia nirongatra ny varotra solosaina sy takelaka rehefa nianjera ny varotra smartphone.
Miala amin'ity Pequeño ankoatra ny antsipiriany, izany no iray amin'ireo antony tsy ijanonan'ny mpamorona miloka amin'ny ecosystems finday, ny fisainana fampiharana an-tsarintany an-tsary iray amin'ireo be indrindra. Raha ny marina, ny fampiharana an-tsarintany saina dia miseho isan'andro ao amin'ny Google Play Store.
Miaraka amin'ny safidy maro dia maro, mihasarotra hatrany ny mahita ny app izay tsara ary iza no tsy mety. Mba hahafahanao misafidy izay rindranasan-tsarintany saina mifanaraka amin'ny zavatra ilainao indrindra, avy amin'ny Androidsis izahay dia namorona lisitra iray miaraka amin'ireo Fampiharana an-tsarintany saina 10 tsara indrindra ho an'ny Android.
1 Sarintan-tsaina: Zava-misy mitombo
Sarintan-tsaina: Zava-misy mitombo
Atombotsika amin'ny alàlan'ny fampiharana iray tsy mitovy amin'ny nahazatra antsika ity fanangonana ity, satria ahafahanay mahazo tombony betsaka amin'ny sehatra Augmented Reality (ARCore) an'ny Google mankany mamorona sarintany saina misimisy 3D amin'ny sary mihetsika na mihetsika.
Ny kinova maimaimpoana an'ny Mind Map dia ahafahantsika mampiditra rakitra, manampy hyperlinks, mametaka rakitra avy amin'ny serivisy fitehirizana, milalao horonantsary sy audio, manitatra sy mihintsana ny fizarana ... Raha te-hanampy fakan-kazo tsy manam-petra izahay, rohy tsy misy fetra, fivezivezena ary betsaka kokoa, tsy maintsy mamaky ilay boaty isika.
Araka ny efa nanamarihako tamin'ny fehintsoratra teo aloha, misy ny Mind Map ho anao misintona maimaim-poana, kinova izay misy doka sy fividianana ao anatin'ilay rindranasa hanaisotra ny doka sy hamaha ny fidirana amin'ireo asa rehetra atolotry ny fampiharana.
Raha te hampiasa ity rindranasa ity dia tsy maintsy tantanan'i Android 7.0 (kinova farany ambany izay mifanaraka amin'ny ARCore).
Sarintan-tsaina: AR - ARCore miaraka amin'ny zava-misy mitombo
Mindomo dia fampiharana an-tsarintany an-tsarimihetsika azo alaina amin'ny solosaina ihany koa manana kinova ho an'ny Android. Izy io dia manana endrika sy endrika mahafinaritra ahafahan'ny mpampiasa miaina ny herin'ny kinova desktop amin'ny felatanany.
Izy io dia manana safidy marobe toy ny modely, ny fampifanarahana ny mpizara ary ny asa fanondranana rakitra, miasa na dia tsy misy fifandraisana Internet aza, misy ny fiasa amin'ny fiaraha-miasa an-tserasera izay ahafahan'ny mpampiasa mizara ny sarintanin'izy ireo amin'ny olon-kafa ary manitsy azy miaraka.
Mindomo dia fampiharana iray azontsika atao misintona maimaim-poana Amin'ny alàlan'ny Play Store dia tsy misy doka na fividianana fampiharana ary mitaky Android 6.0 na taty aoriana.
Mindomo (sarintanin'ny saina)
Developer: Fampiharana rindrambaiko manam-pahaizana Srl
GitMind dia iray amin'ireo fitaovana ilaina indrindra ho an'ny mpampiasa Android satria ny mpampiasa dia afaka manomboka miasa amin'ny tetikasan-tsarintany fisainany avy hatrany aorian'ny fametrahana ity rindranasa ity hatramin'ny Tsy voatery hisoratra anarana amin'ny fisoratana anarana hahafahana mampiasa azy.
Na dia afaka aza, tsy misy doka manelingelina raha miara-miasa amin'ny fampiharana izahay, izay fanamaivanana lehibe ho an'ny olona tsy manam-bola firy. Ho fanampin'izany, dia misy modely marobe, modely izay hanampy amin'ny asa famoronana haingana ny sarintanintsika.
Raha hizara ny sarintaninay amin'ny olon-kafa dia azontsika atao amin'ny alàlan'ny URL izany, izay azo idirana amin'ny mpitety tranonkala rehetra. Misy GitMind ho anao misintona maimaim-poanaTsy misy doka fa tsy misy karazana fividianana fampiharana.
GitMind - Sarintanin'ny saina sy Sarintany momba ny hevitra
Developer: Voafetra ny APOWERSOFT
Coogle dia iray amin'ireo sehatr'asa hamoronana sari-saina misy amin'ny solosaina izay misy ihany koa amin'ny endrika fampiharana Android, izay mamela antsika tohizo ny sarintanin'ny saintsika na aiza na aiza
Manome endrika isan-karazany, toy ny fiaraha-miasa amin'ny fotoana tena izy, fanohanana ny varotra ary modely maimaim-poana. Ho fanampin'izany, mamela antsika hizara ny asanay avy hatrany amin'ny alàlan'ny URL iray izay azo idirana amin'ny mpitety tranonkala rehetra.
Noho ny fiasa tena tsara dia afaka milaza isika fa izy io dia iray amin'ireo rindrambaiko fandefasana saina tsara indrindra ho an'ny Android, fampiharana izay azontsika atao misintona maimaimpoana, tsy misy doka na fividianana fampiharana ary mitaky Android 6.0 na taty aoriana.
miMind dia manolotra antsika, ankoatry ny fiasa hafa, ny fanafarana fitahirizana rahona, vonjeo mandeha ho azy rehefa mivoaka, manaova kopia voafafa amin'ireo rakitrao amin'ny serivisy fitehirizana rahona isan-karazany toa ny Google Drive sy Dropbox ho fanampin'ny fanolorana modely maro be maimaimpoana aminay.
Tsy manana doka manelingelina ary tsy mila fisoratana anarana amin'ny fangatahana hampiasana azy. Azontsika atao ny milaza fa ity dia fampiharana an-tsarintany tena miasa sy mahasoa ho an'ny Android nefa tsy matahotra ny ho diso.
MiMind dia azo alaina ho an'ny misintona maimaim-poanaTsy tafiditra ao ny doka fa raha mividy in-app ianao hamaha ny fidirana amin'ireo fiasa rehetra atolotray antsika. Ny kinova kely indrindra an'ny Android izay mifanaraka amin'ity rindranasa ity dia Android 5.0.
miMind - Minda vita amin'ny saina mora
Mendrika tafiditra ao anatin'ity lisitra ity i Mindly noho ny safidiny fiarovana noho ny fisie izay mamela ireo mpampiasa azy miaro ny sarintanin'ny sainao ny teny miafina hitazona azy ireo manokana na hametra ny olona afaka mahita ny sary.
Ny fampiharana dia mitambatra tsy misy fangarony amin'ny ankamaroan'ny serivisy fitahirizana rahona ary izy io dia natsangana ho toy ny clipboard visual izay manampy hanamora ny fiankinan'ny fampiharana an-tsarintany an-tsarintany ho an'ny Android.
Afaka mampiasa Mindly isika Tsy misy fifandraisana Internet, noho izany safidy tsara tokony hodinihina rehefa mandray an-tsoratra ny diantsika. Azo alaina maimaim-poana ity rindranasa ity, tsy misy doka fa misy fividianana fampiharana mba hamohana ny fidirana amin'ny endri-javatra rehetra.
Mindly (sarintany an-tsaina)
Ity no kinova finday an'ny rindrambaiko MindManager izay misy amin'ny solosaina. Amin'ity kinova ity ho an'ny fitaovana Android, afaka mahazo ny ankamaroan'ny fiasa sy fiasa izay misy izahay misy amin'ny kinova birao. Na dia kinovan'ny kinova desktop aza ny MindManager Go dia manana endri-javatra miavaka antsoina hoe MindManager Snap.
Io fampiasa io dia ahafahan'ny mpampiasa mampiasa makà pikantsary ary zarao amin'ny kinova solosaina avy eo. Ho fanampin'izany, mamela antsika hanondrana sarintany ao an-tsaintsika amin'ny fitaovana Android amin'ny endrika samihafa ihany koa izy io.
MindManager Go dia misy ho anao misintona maimaim-poana, tsy misy doka na fividianana fampiharana ary mitaky Android 5.1 na taty aoriana.
MindMeister dia fampiharana an-tsarintany saina amin'ny fitaovana Android. Tonga lafatra nohamarinina ho an'ny efijery finday smartphone sy tablette ho an'ny fanovana tonga lafatra sy mora ny sarintanin'ny saintsika. Ny fahafaha misintona sy milatsaka hanitsy ny sarintanin'ny saina dia iray amin'ireo manintona indrindra miaraka amin'ny fiarahamiasa, ary koa ny fomba fampisehoana.
Mamela antsika manondrana sarintany saina amin'ny endrika rakitra Word sy PowerPoint. Satria tsy lozisialy fandefasana sary an-tsaina maimaimpoana ho an'ny Android ity dia hanana safidy hisoratra anarana amin'ny drafitra Pro ianao, izay hamaha ireo fisehoan-javatra mahatalanjona hafa amin'ny fampiharana.
MindMeister dia azo alaina maimaim-poana, tsy misy doka fa ao anatiny fividianana fampiharana amin'ny endrika famandrihana, Ka raha te handoa vola tokana ianao amin'ny fampiharana an'io karazana io ary manadino ny fandoavam-bola amin'ny ho avy, ny safidy natolotr'i MindMeister anay dia tsy izay tadiavinao.
Gloow dia iray amin'ireo safidy malaza indrindra amin'ireo fitaovana fanaovana sarintany an-tserasera. Noho io fahombiazana io dia azo jerena amin'ny finday amin'ny alàlan'ny fampiharana iray ihany koa ny fampiharana. Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny fahombiazany dia mitoetra ao amin'ireo maodely kalitao marobe atolotray antsika sy traikefa mahafinaritra amin'ny finday.
Ankoatra izany, azonao atao miasa tsy misy data sy serivisy amin'ny Internet. Ny fiaraha-miasa amin'ny Internet dia endrika mahaliana iray hafa amin'ny fampiharana miaraka amin'ny fahafaha-manondrana sarintany saina amin'ny endrika hafa. Eo ihany koa ny fahafahan'izy ireo mampiditra sary amin'ilay grafika mba hampitomboana ny marimarina kokoa sy hahatonga ny saina ho manintona kokoa.
Ireto misy sasany amin'ireo antony mahatonga ny Gloow ho iray amin'ireo fampiharana fampiharana sarintany saina tsara indrindra ho an'ny Android azonao ampiasaina. Toy ny teo aloha ihany, Gloow dia misy ho anao misintona maimaim-poanata ary misy fividianana fampiharana hampidirana ny fidirana amin'ny endri-javatra rehetra.
Sarintany saina sy sarintany momba ny eritreritra: Gloow
DoUnmind dia fampiharana tsy dia malaza loatra raha oharina amin'ireo teo aloha, saingy tsy latsaka ambany amin'ny resaka asany. doUmind dia manolotra endrika 8 sy paleta miloko 21 loko hanamboarana ny sarintaninay ho faran'izay lehibe. Misy koa ny asan'ny fanondranana izay ahafahanao manokatra rakitra amin'ny rindranasa hafa toy ny PowerPoint, MindManager ankoatry ny hafa.
La fiaraha-miasa amin'ny Internet dia iray amin'ireo fiasa izay azo alaina ao amin'ity rindranasa ity koa. doUmind dia misy ho an'ny misintona maimaim-poana, misy doka sy fividianana fampiharana mba hamohana ny fiasa rehetra atolotray antsika ary mitaky Android 5.0 na taty aoriana
doUmind - Scanner ny sarintany saina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana 10 ambony indrindra hanaovana Maps Maps
Ireo rindranasa 5 tsara indrindra hivarotana zavatra